BUDDHIST TERMS' Dictionary: GEM - ရတန
GEM - ရတန
ရတန - ရတနာ၊ နှစ်သက်ဖွယ် မြတ်နိုးဖွယ်အရာ။
(၁) ရတနာသုံးပါး၊ ဘုရား တရား သံဃာ။
(၂) ရတနာခုနှစ်ပါး -
သုဝဏ္ဏ - ရွှေ
ရဇတ - ငွေ
မုတ္တာ - ပုလဲ
မဏိ - ပတ္တမြား
ဝေဠုရိယ - ကြောက်မျက်ရွဲ
၀ဇိရ - စိန်
ပ၀ါဠ - သန္တာ
(၃) သားသမီးရတနာ၊ ဆင်, မြင်းရတနာ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
Things which are considered to be precious in many ways are counted as gems or jewels. Among the notable entities are:
1. The Three Gems, namely, the Buddha, the Dhamma and the Saṁgha;
2. The seven gems, namely, (i) gold - suvaṇṇa, (ii) silver – rajata, (iii) pearl – mutta, (iv) ruby - maṇa, (v) cat’s eye – veḷuriya, (vi) diamond – vajira and (vii) coral - pavᾱḷa;
3. One’s children, and elephants and horses of noble pedigree.